Kulankii Qasriga, Dalabkii Muuse Biixi, Diidmadii Madaxtooyada Iyo Cadhadii Ka Dambaysay.. | Saxil News Network
Kulankii Qasriga, Dalabkii Muuse Biixi, Diidmadii Madaxtooyada Iyo Cadhadii Ka Dambaysay..
Hargeysa (Saxilnews)-Sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxaa Madaxtooyada Somaliland shalay ka dhacay kulan gaar ah oo u dhexeeyey Madaxwaynaha Siilaanyo, Murashaxa Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi , iyo kooxd Wasiirro ah oo uu hoggaaminaayo Wasiirka madaxtooyadu, waxaana kulankaas sida la sheegay dalabkiisa lahaa Muuse Biixi Cabdi, Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE.
Muuse Biixi Oo Soo Jeediyey Qorshe Qayb Ka Ah Ololaha Xisbiga KUL Iyo Madaxtooyada Oo Ka Cudur-daaratay
Nuxurka kulankan saddex geesoodka ah ayaa la sheegay inuu ku qotomay codsi ka yimi Murashaxa KULMIYE Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku salaysan barnaamijka ololaha Xisbiga ee doorashada maadaama wakhtigii loo asteeyey muddo yari ka hadhsan tahay islamarkaana ay duufaano siyaasadeed soo wajaheen Xisbiga KULMIYE labadii bilood ee u dambeeyey.
Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu si aan gabasho lahayn miiska u soo saaray qorshe uu Madaxtooyada kaga codsaday isku shaandhayn salaanka ka tuurta Wasiirada iyo Agaasimayaasha aan ku haboonayn ololaha Xisbiga isagoo sidoo kalena codsaday in la soo ciyaarsiiyo shakhsiyaad daacad ka ah murashaxnimadiisa.
Balse sida ay xaqiijinayaan Ilo wareedyo laga helay kulan kaas Madaxtooyada ayaa ku gacansaydhay codsiga Muuse Biixi, iyadoo Madaxtooyadu diidmadeeda ku salaysay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo saan-saanta doorasho lagu qaban karo oo aad u hoosaysa.
Intaasi kadib Muuse Biixi ayaa la sheegay inuu si cadho leh oo deg-degna ku jiro uga soo baxay hoolkii shirka islamarkaana uu gabi ahaanba soo waydaartay albaabka Madaxtooyada, waxaana muuqatay inuu kulankani ku soo dhammaaday garawshiyo la’aan ay Madaxtooyada iyo Muuse labadooduba ku kala.tageeen.
Marka laga tago ilo wareedyadaas looga qaateenka ah ma jiro war rasmi ah oo kulankaas ku saabsan oo labada dhinac ka soo baxay.